Ebumnuche ọhụụ gụnyere inyere ndị na-eto eto aka ịghọ ndị na-adigide - Potatoes News
Ebumnuche ọhụrụ gụnyere inyere ndị na-eto eto aka ịghọ ndị na-adigide
N’oge a tọhapụrụ ọhụrụ 2020 Nkwupụta Nkwado, Corteva Agriscience esetịpụla ihe nyocha sayensi maka mbelata ikuku gas na-egosipụta ma gosipụta ebumnuche 2030 ya iji nwekwuo ike nke usoro nri ụwa, nke gụnyere inyere na imekọ ihe na ndị na-eto eto.
A na-ewepụta akụkọ nkwado Corteva otu afọ mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara 14 afọ iri na ụma iji kwalite nkwado maka ndị ọrụ ugbo, maka ala, na obodo na ọrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Onye isi oche Jim Collins kwuru, sị: "Site na ịlele ihe ịma aka a zuru ụwa ọnụ taa, anyị na-ewusi ike anyị ịzụlite nri, nwee ọganihu na iwulite ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide nke ga-enyere mmadụ aka ime nke ọma n'ọgbọ na-abịa."
Anne L. Alonzo, SVP External Affairs na Chief Sustainability Officer, Corteva Agriscience, kwuru na akụkọ ahụ na-enye mmelite banyere otu esi enweta nke a site na ngwaahịa, imekọ ihe ọnụ na mbọ nke ndị ọrụ 21,000 ya gburugburu ụwa.
Na UK, Corteva dị ọnwa iri na asatọ n'ime afọ atọ 'Resilient and Ready' nke gụnyere ọzụzụ, nkwado teknụzụ na ndụmọdụ nye ndị na-eto eto iji nyere ha aka ịnabata usoro ọrụ ugbo.
Nkwa ụlọ ọrụ ahụ gụnyere:
• 65% ike Mbelata akporo 1 na 2 umu anwuru
• 20% ike Mbelata akporo 3 anwuru
Akụkọ ahụ na-egosipụtakwa ọrụ na onyinye nke ndị ọrụ Corteva iji melite obibi na arụmọrụ nke ndị na-eto eto mgbe ha na-echekwa akụrụngwa na ịkwagide ala ahụ, na-ewusi obodo ike ma na-amụba nkwado n'ime ọrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Isi Iyi: potatoreview.com
Tags: Corteva agrisciencena-enyere ndị na-eto eto aka
Onye na-ebubata UK na biostimulant sitere na mmiri chọrọ ịtọlite ​​ndị ọrụ ugbo mpaghara
Poteto na ọka bali dị ka ihe mejupụtara ya na '' Spud's for You '' Beer Canada
Enyere teknụzụ nsị mkpụrụ osisi ọzọ
Nhọrọ dị ụtọ 'New 100% Plastic-free, Recyclable and Compostable Packaging
Ụlọ ọrụ Grote nwetara ihe nrụpụta nri nkenke (PFI)
NGI na-ebugharị ụkpụrụ ịdị ọcha maka akụkụ ndị na-akpụ akpụ na ụdị ngwaahịa ọhụrụ
Ọkpụkpọ ekpomeekpo kacha ọhụrụ na Japan maka ekeresimesi: Shortcake Strawberry
6 afọ gara aga
NWA WESTON NA-AKW NEWKWỌ AKW NEWKWỌ AKW NEWKWỌ ỌZỌ NA RICHLAND